23 พ.ค. 2563 - 22:30 น.
ပျောက်ဆုံးနေသူအပါအဝသ် သူ့ကို လိုက်ရှာဖွေသူ ၁၅ ဦး စုစုပေါင်း ၁၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပြီး ရှာဖွေသူတွေထဲက တစ်ဦးက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာလို့ အခုလက်ရှိ ၁၅ ဦးဖမ်းဆီးခံနေရပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ အလယ်ကျွန်းကျေးရွာသား ၁၅ ဦးအနက် လေးဦး ကိုတော့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းပြန်လာကြဖို့နဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေကိုပါ တပါတည်း လွှတ်ပေး မယ်လို့ ဖုန်းဆက်ခေါ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းရှိတဲ့နေရာကို ပြန်သွားခဲ့ကြရာ ဒီနေ့အထိ ၁၅ ဦးစလုံး ဆက်လက်ဖမ်း ဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လူပျောက်ရှာတဲ့ အလယ်ကျွန်းရွာသားတွေဖမ်းဆီးခံရ